ဘယ်တော့မှ ဆေးမှင်ကြောင် မထိုးဟု စူပါစတား ရှားရွတ်ခန်း ပြောကြား | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ သီချင်း
ဘယ်တော့မှ ဆေးမှင်ကြောင် မထိုးဟု စူပါစတား ရှားရွတ်ခန်း ပြောကြား
ကမ္ဘာကျော် စူပါစတား ဘောလီဝုဒ် ရုပ်ရှင်မင်းသား ရှာရွတ်ခန်း (Shah Rukh Khan) က မည့်သည်အခါတွင်မှ ကိုယ်ခန္တာတွင် ဆေးမှင်ကြောင် (tattoo) မရေးထိုးဟု ပြောသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ရှာရွတ်ခန်းက အိန္ဒိယသမိုင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်သော “အသောက” (Asoka) ကဲ့သို့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွင်း သရုပ်ဆောင်ရာ၌ လိုအပ်ချက်အရ ခေတ္တခဏအတွက်သာ ကပ်ခွါမှင်ကြောင်အတု သုံးစွဲခဲ့ပြီး လက်တွေ့ဘဝတွင်မူ “ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးခြင်း” အမှုကို မပြုရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ဆံကေသာ အရောင်းဆိုးခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍လည်း ထိုသို့ပင် သဘောရှိကြောင်း ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသား ရှာရွတ်ခန်း ကဆိုသည်။
မျက်နှာအလှဆင်ရန် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း (plastic surgery) အပါအဝင် ခန္တာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများအား အမြဲတမ်းအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုခြင်းကို မပြုလုပ်ဟု မင်းသား ရှားရွတ်ခန်းက ဆိုသည်။
ကိုးကား – TOI
အခြားသက်ဆိုင်ရာ သတင်းဆောင်းပါးအကောင်းဆုံး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတို အော်စကာဆု ပါကစ္စတန် အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ ရရှိနိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် အားကစားမယ် အီဂျစ်နိုင်ငံသူ ဖာသီမာအိုမာရ်အိန္ဒိယ-မွတ်စလင်သန်းကြွယ်သူဌေး ရက်ရောမှုအများဆုံးစာရင်း အဆင့် (၄) ချိတ်CNN သတင်းဌာနမှ ချီးမွမ်းတင်ပြသော စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင် မွတ်စလင် အမျိုးသမီးငယ်Squash ကြက်တောင်ရိုက် အားကစား ကမ္ဘာ့အဆင့် (၁) အီဂျစ်အမျိုးသမီး El Welily ဆွတ်ခူးပါကစ္စတန်မှ ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး Microsoft Certified ပညာရှင်လေးများဗြိတိသျှ-မွတ်စလင် ပြေးခုန်ပစ် ချန်ပီယံ မိုဖာရာ (၃) နှစ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲကာ စံချိန်သစ်တင် မှတ်တမ်းဝင်ပါကစ္စတန် ခရစ်ကက် အကျော်အမော် Shahid Afridi အလှူအတန်း အရက်ရောဆုံး အားကစားသမားများ စာရင်းမှာပါဝင်စင်္ကာပူ အရှေ့တောင်အာရှရေးရာဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အား ပထမဦးဆုံးသော သမ္မတ မလေး-မွတ်စလင်အမည် ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုဆော်ဒီတော်ဝင်မင်းသမီး ကုလအထူးသံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရ Bollywood, Famous Muslim, Global News, India, Muslim, Muslim News One Response to ဘယ်တော့မှ ဆေးမှင်ကြောင် မထိုးဟု စူပါစတား ရှားရွတ်ခန်း ပြောကြား
lovesmil.lovesmile@gmail.com says:	April 27, 2013 at 2:41 pm	hi
LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published.Comment Name Email Website Search “MMV” LIKE “MMV” ON FACEBOOK Recent News	European Parliament condemns practices against Muslim minority in Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူဆလင်များအပေါ် ဖိနှိပ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ဥရောပ ပါလီမန် ရှုတ်ချ
ASEAN MPs: Myanmar government must take action in response to anti-Muslim violence
“ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးသည့် နှစ်လေးဆယ်ပြည့်နေ့ အမှတ်တရ”
Myanmar must address ‘serious’ human rights violations against minorities – UN rights chief
UN Special Rapporteur on human rights in Myanmar to undertake official country visit
ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း (၂၀) – ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံအား ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ရှုဒေါင့်မှ သုံးသပ်ခြင်း
Buddhist Fanaticism: I Rejected It
ဖက်ဒရယ် ဥပဒေအကယ်ဒမီမှ ဥပဒေအလုပ်သင်များ ခေါ်ယူခြင်း
DVB – လှိုင်းဘွဲ့ ရွှေဂွန်းရွာတွင် ဗလီဘေးနား စေတီတည်
An Appeal for Pope Francis to Share with the World an Encyclical on Nonviolence and Just Peace, and for the Church to Stop Teaching ‘Just War Theory’
APHR: Release of political prisoners in Myanmar representsapositive step
Istanbul hosts the 13th Islamic Summit Conference on 10-15 April
Myanmar shelves investigation into killing of journalist Ko Par Gyi
အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ အရေပျားလှီးဖြတ် မင်္ဂလာပြုခြင်း (Circumcision) ဓလေ့
IB Times UK မှ တင်ဆက်သော Inside Burma – The Hidden Genocide ရုပ်/သံ သတင်းတို
နိုင်ငံတကာပုံရိပ်တွင် ညှိုးနွမ်းလာပြီဖြစ်သော ဗုဒ္ဓသာသနာ
အီဂျစ်ပြည်သူ သမ္မတမော်စီ ဘက်တော်သားများအား တူရကီ ဒါနအဖွဲ့မှ တစ်နေ့လျှင် “အိဖ်သာရ်” (၆၀၀၀) ထောက်ပံ့လှုဒါန်း
Microsoft Office 2013 ဆိုင်ရာ စာအုပ်၊ စာတမ်းများ
တားမြစ်ခံရသော်လည်း ဦးဝီရသူ ဆန္ဒဆက်ဖေါ်ထုတ်
အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ ပထမဆုံး သမ္မတကြီး မိုဟာမက် မော်စီ
The United States’ Secretary Kerry on Myanmar’s Thingyan
ကုလသမဂ္ဂ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ကာကွယ် တားဆီးရေးမှ မြန်မာအစိုးရကို ပြင်းထန်စွာ သတိပေးပြီ
အထူးသတင်း – ကုလသမဂ္ဂမှ ရခိုင်အကြမ်းဖက်မှု နောက်ဆုံးသတင်းနှင့် စာရင်းဇယား ထုတ်ပြန်
အလ်ဂျာဇီယာက တင်ဆက်တဲ့ မြန်မာမွတ်စလင် များ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှု ရုပ်/သံသတင်းတို
Islamic News DailyWe’ve Got Some Bad News, Robots Likely To Be Better Than Us At Everything By 2060Lesley Hazleton: The doubt essential to faithIndia’s rising temperatures already deadly, study showsI have prosecuted terrorists – and know human rights laws make us safer Keir StarmerUN chief warns oceans ‘under threat as never before’ IslamSaudi Security Forces Intercept Militants Plotting Mecca AttackBombings in Pakistan Kill Dozens, Putting Country on EdgeAyaan Hirsi Ali and Asra Q. Nomani Respond to ReadersOf Allah, Charity and TaxesArab Nations Demand Qatar Shut Al Jazeera, Cut Islamist Ties and Detail Funding © 2017 Myanmar Muslims' Voice (MMV). All Rights Reserved. The MMV is not responsible for the contents of external sites. Powered by WordPress | Designed by: Airport parking at Bristol | Thanks to Theatres in Manchester, Sell old mobile and Unlimited broadband deals